Midowga Afrika oo ka hadlay Go’aankii DFS ku dalbatay in la bedelo John Mahama | warsanradio baydhabo
Home WARARKA MAANTA	Midowga Afrika oo ka hadlay Go’aankii DFS ku dalbatay in la bedelo John Mahama
Midowga Afrika oo ka hadlay Go’aankii DFS ku dalbatay in la bedelo John Mahama
Midowga Afrika ayaa ka hadlay Go’aankii dowladda Federaalka Soomaaliya ku dalbatay in la bedelo Ergeyga gaarka ee Midowga u soo magacaabay Soomaaliya John Mahama oo ahaa Madaxweynihii hore ee dalka Ghana.
Guddoomiyaha Midowga Afrika ahna Afhayeenka Madaxweynaha DRC Felix Tshisekedi ayaa sheegay in dalabka dowladda Soomaaliya ee ku codsatay in la bedelo John Mahama uu Midowga kala tashan doono dalalka xubnaha ka ah Midowga Afrika.
Sidoo kale Felix Tshisekedi ayaa walaac ka muujiyay qaabka uu Midowga Afrika ku doonayo inuu ku xaliyo khilaafka hareeyay qabsoomida doorashada ka dhaceysa dalka Soomaaliya oo Madaxda dowladda iyo kuwa maamul Goboleedya aysan weli heshiis ka gaarin.
“Qadiyadahan oo kale, Madaxtooyadda AU-da si hal dhinac ah go’aan ugama gaarto waxay la tashaneysaa guddiga iyo Golaha Ammaanka iyo Nabadda ee AU-da,” ayuu yiti Zenon oo kamid ah kooxda ka talo bixisa arrimaha khuseeya Qaaradda Afrka.
Dowladda Federaalka Soomaaliya ayaa ku tilmaamtay John Mahama in uusan dhex dhexaad ka noqon karin Arrimaha doorashada dalka ka dhaceysa, isla markaana ay u baahan yihiin la bedelo, iyagoona arrintaas ka codsaday Midowga Afrika.
Dowladda Federaalka ayaa sidoo kale sheegtay in Midowga Afrika uusan kala tashan soo magacaabista Madaxweynihii hore ee Ghana John Mahama, iyadoona aan loo marin nidaamka dhinaca diblumaasiyada.
Midowga Afrika oo ka hadlay Go’aankii DFS ku dalbatay in la bedelo John Mahama was last modified: May 18th, 2021 by Admin
Guddoomiyihii gobolka Wajeer oo xil ka qaadis lagu sameeyay
Dhageyso:-Gudoomiyaha Barlamaanka Koonfur galbeed ayaa manta lagu soo dhaweeyay baydhabo isagoona been abuur ku tilmaayay warqad dhawaan baraha bulshada qabsatey
Maamulka Puntland oo soo Bandhigay waxyaabaha qarxa